▄ လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ – Min Thayt
• တေးရေး တေးဆို ဝေလ
• သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု
• ဒါရိုက်တာ ဏကြီး
• သီချင်း – https://www.youtube.com/watch?v=7IpTPxca7w8
• မှတ်ချက်။ ။ သီချင်းကိုလည်း နားထောင်ပါ၊ ရုပ်သံဗီဒီယို သရုပ်ဖော်ကိုလည်း ကြည့်ပါ။
အဆိုတော် ဝေလဟာ ဒီသီချင်းကို ဘယ်နှခုနှစ်က ရေးတယ်လို့ မသိပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က (၂၀၁၅ – ၁၆) လောက်က ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ် တေးရေး တေးဆို အသစ်တွေထဲမှာ ဝေလနဲ့ ဝေကြီးတို့ရဲ့ သီချင်းတွေ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကို အသစ်တွေလို့ ပြောတယ်ဆိုတာ၊ ခင်မောင်တိုး ခိုင်ထူး စိုင်းထီးဆိုင် မျိုးဆက်နဲ့ အငဲ မျိုးကြီး လေးဖြူ မျိုးဆက်တို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာများတဲ့လူတစ်ယောက်အဖို့ ဝေလတို့ ဝေကြီးတို့က ဒီဘက်ခေတ်မျိုးဆက်ထဲ ရောက်လာလို့ အသစ်လို့ ပြောတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲ တိုးဝင်ခဲ့တာ ကြာမြင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ကျနော်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကမှ စပြီး သတိထားမိတယ်။ နားထောင်ကြည့်တော့ သီချင်းအတော်များများကို ကြိုက်တယ်။
▣ လူမှုပြဿနာတစ်ရပ်ကို မီးမောင်းထိုးပြ
ဝေလဟာ တေးသီချင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေနဲ့ ဖောက်ထွက် သီဆိုနိုင်တာကို သတိထားမိတယ်။ ညနေမျက်ရည်…လို စိုးလွင်လွင်၊ မီမီဝင်းဖေ တို့ သီဆိုဖူးခဲ့တဲ့သီချင်းကို ပြန်ဆိုတေးအဖြစ် ပြန်နားထောင်ရတော့လည်း ရင်ထဲ ငြိတယ်၊ ထိတယ်။ ဝေလဟာ တေးသီချင်းတွေကို သူကိုယ်တိုင်ရေးတာ တွေ့ရတယ်။ အခု ပြောချင်တဲ့ – လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ … သီချင်းဟာ ဝေလ ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ဝေလ ကိုယ်တိုင် ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူမှုပြဿနာ (social problem) တွေထဲက တစ်ခုကို မီးမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်သလို၊ လူသားဘဝ ဖြစ်တည်မှုလိုအင်ကိုလည်း ခံစားမိပါတယ်။ လူသားဆန်မှုနဲ့ ကလေးတစ်ယောက် လူသားဆန္ဒကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဝိပဿနာရှုထောင့်အရ ကြည့်ရင် – ဘဝတဏှာကို မက်မောတမ်းတတဲ့ ဒဿနတရားတွေကို မြောက်မြားစွာ တွေ့ရပါတယ်။ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ခေတ်သစ်လှိုင်းရဲ့ ကြုံရတဲ့ဒဏ်တွေကို တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ယခင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဟောင်းမှာလည်း ကြုံလေ့ကြုံထ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိခဲ့ပေမယ့်၊ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ခပ်များများတွေ့ရတဲ့ လူမှုပြဿနာအဖြစ် တွေ့ရတာကတော့ – ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိသန္ဓေတည်မှုကို မလိုလား၊ ငြင်းဆန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
▣ တေးရေးဆရာရဲ့ လူသားထောင့်
ဒီနေရာမှာ တေးရေးဆရာဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားခြင်း – မှန်ခြင်းကို မဆုံးဖြတ်ပါ။ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကိုပဲ ရင်ထဲမှာ ငြိတွယ်အောင် ပြောပြပြီး လူသားဖြစ်တည်မှုကို အသက်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ အနူးညွတ်တောင်းဆိုလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။
ခေတ်သစ်လူမှုနှုန်းစံတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေက လှိုင်းပုတ်လှုပ်နိုးလို့ နိုးကြွလာတဲ့ လူမှုနှုန်းစံအယူအဆတွေဟာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာတာကြောင့်၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း မချခြင်း၊ ကလေးယူခြင်း မယူခြင်း၊ ယောက်ျားမိန်းမ လူသိရှင်ကြားလက်မထပ်ဘဲ အတူတကွ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းကိစ္စတွေဟာ ပေတံအမျိုးမျိုး၊ ပေကြိုး အမျိုးမျိုး အောက်မှာ ဖြစ်သင့်၏၊ မဖြစ်သင့်၏ အငြင်းအခုန်ဖြစ်နေကြဆဲပါ။
လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောသူတွေအဖို့ ကိုယ့်ကာမပိုင်ကိစ္စဟာ ကိုယ့်တစ်ဦးတည်း ကိစ္စသာဖြစ်တယ်၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပြဌာန်းစရာ မလိုဆိုတဲ့ အယူအဆတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူမျှရင် လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်အယူအဆတွေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဘောင်ထဲကနေ အဟောင်းဓလေ့ကို ခံတပ်ပြုပြီး တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူမှုသဘောထားတွေလည်း ခပ်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဟာ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရောထွေးနေပါတယ်။ မြန်မာဟောင်းနဲ့ မြန်မာသစ်အကြားမှာ လွန်ဆွဲဖြစ်တည်နေပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုပဲ လွန်ဆွဲဖြစ်တည်နေပါစေ၊ မြို့ပြနေ လူမှုဘဝတွေမှာ ဆန်းကျယ်သော ဖိုမကိစ္စတွေဟာ ကျယ်ပြန့်နက်နဲရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနက်နဲရှုပ်ထွေးမှုကြားမှာ အမှားတစ်ဖက်၊ အမှန်တစ်ဖက် ရှိနေကြသလို၊ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဘောင်ကို တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူမှုအရှုပ်အထွေးတွေကြားက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု၊ ပဋိသန္ဓေကို မိမိဆန္ဒ ကာယကံရှိတို့ရဲ့ သဘောဆန္ဒအရ ဖျက်ချမှုဟာ မြန်မာ့လူမှုနှုန်းစံတွေအကြားမှာ အမှားအမှန် ပြတ်ထင်နေခြင်း မရှိသေးပါ။
တချို့က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်လို့ မြင်တယ်။ တချို့ကတော့ တစ်ဦးချင်း လွတ်လပ်ခွင့်သာ အခရာလို့ မြင်တယ်။ တချို့ကလည်း ဘာသာရေးနှုန်းစံတွေနဲ့ လူ့အသက်တစ်ချောင်း မသတ်ကောင်းဘူးလို့ ယုံမှတ်လက်ခံထားကြတယ်။ ဒီလို အမှားအမှန် ရောထွေးနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာ – တေးရေးဆရာဟာ လူသားဖြစ်တည်မှု ရှု့ထောင့်ကနေ ချည်းကပ်ပါတယ်။ လူသားဝါဒကို လက်ကိုင်ထားပါတယ်။
▣ တေးသီချင်းရဲ့ အကျုံးဝင်မှု
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု ဆိုတာမှာ – လက်မထပ်သေးဘဲ အတူနေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ စားဝတ်နေရေး အကျပ်အတည်းအရ သော်လည်းကောင်း၊ တခြားသော အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သော်လည်းကောင်း လက်ထပ်ထားသော်လည်း ရပြီးသော ပဋိသန္ဓေကို ငြင်းဆန်လိုက်ခြင်းဖြစ်စေ – လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ အကျုံးဝင် သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တေးရေးဆရာဟာ – လူဖြစ်ချင်တဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုယ်စား အသံပြုထားပါတယ်။ လူဖြစ်မလာသေးတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ မပြောတတ်၊ မဆိုတတ်၊ ပြောဆိုခွင့်မရသေးတဲ့ လူသားဘဝကိုတောင် ခြေလှမ်းဖို့ မရေရာသေးတဲ့ လူသားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမျှော်လင့်ချက်၊ စိတ်ဆန္ဒ၊ ခံစားချက်ကို အနုပညာနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူမဖြစ်သေးတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေ သူ့အမေဖြစ်လာမယ့်သူကို သူ့ဆန္ဒ၊ သူ့သဘောထား၊ သူ့လိုအင်၊ သူ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးခြင်းဝေါဟာရတွေနဲ့ တေးရေးဆရာက ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ လူသားတို့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ ထုံကူး မီးညှိနိုင်ပြီး ဘဝအလင်းကို မြင်နိုင်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
▣ လူဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒ
တေးရေးတေးဆို ဝေလဟာ – လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ သီချင်းကို ဘယ်လို စကားလုံးတွေ၊ စာသားတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါသလဲ။
သား … သိချင်သေးတယ်….
မောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူ ….
ကျပ်တည်းနေတဲ့ ဒီမိသားစုလေးမှာပဲ နေမယ်….
အဖေနဲ့ အမေရဲ့ ကြုံနေတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ထမ်းမယ့်
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့၊ လူမဖြစ်သေးတဲ့ကလေးလေးဟာ သူ့ဆန္ဒကို သူ့မိဘဖြစ်လာမယ့် ဖေဖေနဲ့ မေမေကို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ပြောပါတယ်။ မေမေ…. ကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူတွေအကြောင်း သားသိချင်တယ်။ သားရဲ့ မောင်နှမတွေနဲ့ သား ကျောင်းတူတူတက်ချင်တယ်၊ သားကို လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ။ ဖေဖေ….. သားတို့ မိသားစုက ကျပ်တည်းဆင်းရဲနေသည် ဖြစ်စေ၊ သား ဒီကျပ်ကျပ်တည်းတည်း မိသားစုလေးမှာပဲ နေချင်တယ်၊ ကျပ်တည်း ဆင်းရဲရင် ဆင်းရဲပါစေ….သား ရင်ဆိုင်မယ်၊ သားကို လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ… အဖေနဲ့ အမေ ဒုက္ခတွေကြုံနေရင် သားလည်း ကူထမ်းမယ်။ အဖေနဲ့ အမေရဲ့ကြုံနေတဲ့ဒုက္ခတွေကို ကူထမ်းမယ့် ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါ မေမေ….သားကို လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါနော်… ဆိုတဲ့ သဘော။ ဒီသီချင်းစာသားလေးက သိပ်ရိုးရှင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့လူမျိုးကို သိပ်ပြီး ချစ်တတ်တယ်
ဖျက် မချ လိုက်ပါနဲ့…..
ကမ္ဘာမြေပေါ် ရှင်သန်ခွင့်ပေး….. မေမေ….
အမေ့ရဲ့ နို့ချိုတစ်စက်နဲ့ ….
ရန်တွေ ကာကွယ်ဖို့ ….
ဒီနေရာမှာ၊ ရှင်သန်ခွင့်ပေး… ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အလိုလားဆုံးတောင်းဆိုချက် အဖြစ် ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ရှင်သန်ခွင့်ပေး။ ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါ။ လက်ရှိ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ရှင်သန်ခွင့် တွေ ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ လူသားဖြစ်ခွင့်မရသေးချိန်မှာလည်း ရှင်သန်ခွင့်ကို မျှော်လင့်လို့ မရသလို၊ လူသားဘဝ အဖြစ် ဖြစ်တည်လာပြီး လူလူသူသူ ရှင်သန်ခွင့် ဆိုတာလည်း ငတ်မွတ်စွာ မျှော်လင့်နေရသောလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ် ရှင်သန်ခွင့်ပေး၊ ရှင်သန်ခွင့် ပေးပါ။
ကလေးလေးဟာ သူ့လူမျိုးကို သိပ်ပြီး ချစ်တတ်သတဲ့။ မိဘတွေကိုလည်း သူချစ်တယ်။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ အကျိုးကို သယ်ပိုးထမ်းချင်ပါသတဲ့။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျနော့်ကို ဖျက် မချ လိုက်ပါနဲ့။ ကျေးဇူးပြု၍ သားကို ဖျက်မချလိုက်ပါနဲ့နော်….လို့ တောင်းပန်တိုးလျှိုးဝပ်တွားနေတဲ့ ခံစားမှုကို အပြည့်ရလိုက်ပါတယ်။ လူဖြစ်ချင်ဇော ထက်သန်နေတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာ လူဖြစ်ခွင့်ကို ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ပေးရင်ကို ကျေနပ်လှပါပြီ….ဆိုပြီး သူ့ဘက်က အလိုဆန္ဒတွေကို အနိမ့်ဆုံးကို နှိမ်ချပြီး တောင်းဆိုနေတာ။ အမေ့ရဲ့ နို့ချို တစ်စက်နဲ့ သားဟာ ရန်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ တတ်စွမ်းပါတယ်…. သားကို ကမ္ဘာမြေပေါ် ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါ…တဲ့။
အဖေ အမေ ရင်ခွင်ကြား …
သား ဒီမှာ (သား ဒီမှာ )
လူမဖြစ်သေးတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အဖေနဲ့ အမေကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးနေတာ။ ဘယ်လောက် သနားစရာကောင်းလိုက်သလဲ။ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ ရင်ခွင်ကြားမှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေခွင့်ပေးပါတဲ့။ ကလေးလေးဟာ အသနားခံ ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ ကလေးလေးဟာ အနူးညွှတ်တောင်းပန်ခယနေပါတယ်။ သူ လူဖြစ်ခွင့်ရရဲ့လား…..
ဟာသဆိုတဲ့ အရာတွေကြားထဲ ပြုံးချင်တယ်….
မေမေ…. သားသာ လူဖြစ်ခွင့်ရရင်လေ….၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျယ်ပြောတဲ့ အလှတရားတွေဖြစ်တဲ့ တောင်တန်းတွေ ပင်လယ်တွေကို သား ခံစားချင်တယ်၊ သား ကြည့်ချင်တယ်၊ သဘာဝဟာ ဘယ်လောက် ဆန်းကြယ်လိုက်မလဲနော်….။ အဲသည့်အထဲမှာ လူလောကကြီးရဲ့ ဟာသတွေလည်း ရှိအုံးမယ် ထင်ပါတယ်နော်…၊ သား ပြုံးချင်တယ်…. သား ပြုံးချင်သေးတယ်…. သားကို လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ…။
ဝေလရဲ့ လူဖြစ်ခွင့်ပေးပါ ….ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ၊ လူဖြစ်ခွင့်ပေး …. ဖေဖေ၊ လူဖြစ်ခွင့်ပေး …. မေမေ ….ဆိုတဲ့ အော်ပြီး ဆိုရတဲ့အပိုင်းဟာ ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေကို ထုတ်ဖော်သွန်ချလိုက်သလိုပါပဲ။
ရင်ထဲက ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသံဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကျယ်လောင်လိုက်သလဲ….ကြည့်စမ်း။
၂၈၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၁။
Tagged Art, Music, Songs, Wai La
Previous post တရုတ်မုန်းတီးရေးအသံ လေနဲ့ ဝမ်းနဲ့ ကွဲရဲ့လား
Next post ▣ ဗမာ့စိတ်ထား